Homeसमाचारजम्मा २० रुपैयाँको लागि यी बालिका बाढी आएको नदीमा हाम`फालिन् (भिडियोसहित)
August 31, 2021 admin समाचार 5565
मृ`त्युसंग खेल्छन् यि बच्चा र यिनीहरूको ज्या`नको मुल्य हो मात्र ५० रुपैया । कसरी यो सानो सानो बच्चाहरु मृ त्यु सँग खेलिरहेका छन् ? वपन्ती नदीमा ज्या`नको बाजी राखेर पौडी खे`लिरहेका छन् ।
मृ`त्युको छलाङ खुलेयाम भैराछ ।यसलाई रोक्ने`वाला टाढा टाढा सम्म पनि कोई देखिँदैन । यो १-२ चोटी को कुरा होइन । यो बच्चाहरूको त दिनकै बिहान देखि बेलुका सम्म थाहा छैन कति चोटि सानो उमेर को बच्चाहरु यस्तै मा आफ्नो ज्यान जो`खिम मा लगाइ`रहेका छन्।
गाउँमा जन्मेर हुर्केको बच्चा`लाई यो सरनदीमा हाम्फा`लेर पौडी खेल्नु ठूलो कुरा होइन ।तर तपाईं हरुलाई थाहा छ होला एउटा सानो गल्ती भयो भने ज्या`न पनि जान सक्छ। तर यो नदी कति तेज आई रहेको छ ।हेर्न सक्नु हुन्छ ।
वपन्ति नदीको आ`वाज सुन्नु`होला तपाईं पनि मान्नु हुन्छ ।की अलि`कति पनि गल्ती भयो भने यो बच्चाहरु को ज्या`न जान सक्छ ।साथीहरु यस्तो खत`रनाक खेल मा शरीफ केटा`हरु मात्र छैनन् केटी`हरुपनी छन्।
यहाँ केटाहरु भन्दा केटी`हरु पनि कै कम छैनन् ।विश्वास लाग्दैन भने हेर्न सक्नु हुन्छ ।यी के`टीहरु पनि खत्रा को खेलाडी बनिसकेका छन् । अब कुरा आउँछ यी बच्चा`हरु आखिर किन यस्तो गरिर`हेका छन् ?
तपाईंहरू`लाई ला`गिरहेको होला बच्चा मोज मस्ति गरिरहेका छन ।यिनीहरूलाई यो सब गर्न मजा आइर`हेको होला त्यसैले यस्तो खतर`नाक स्ट्यान्ड गर्न लाई पनि पछि हट्दैनन् ।यिनीहरू धेरै चोटि अग्लो पहाडमा गएर नदी`मा हम फाल्ने गर्दछन् ।तर किन सुन्नु होला ।
यँहा कुरा मोज मस्ती को होइन यहाँ कुरा पापी पेट को हो ।कुरा पैसा कमाउने को घर चला`उनेको हो । एक जम्प मार्दा ५० रुपैया मिल्दो रहेछ ।थोरै पैसाको लागि पनि यी बच्चा आफ्नो ज्या`न को बाजी लगाइरहेका छन्।बगि`रहेको नदीले कुनै पनि चीज बगा`एर लान सक्छ ।
ठूला ठूला ढुङ्गा पनि यो नदीमा अडिन सक्दैन बगाएर लान्छ ।अब कुरा आउँछ नदीमा हाम फालेर यी बच्चाहरु कसरी पैसा कमा`उँछन् ।यिनीहरू को आफ्नो ज्यान दाउमा लगाएको पैसा कसले दिन्छ ।
यी बच्चाहरू`लाई यो सब गराउन उस्का`उने अरु कोई होइन तपाईं हामी जस्तो मान्छे नै हो ।जो सो कल्ड एजुकेटेड मान्छे सहरमा बस्छन् ।हामी र तपाईंहरू जस्तो पढेलेखे`को मान्छे ।
जो यस्तो ठाउँमा घुम्न जाँदा भन्छन की यहाँ हाम फाले ५० रुपैया दिन्छु ।भन्छन् आफ्नो मस्ती को लागि यी बच्चाहरूको ज्या`न को कीमत ५० रुपैया लगाउँ`छन् त्यो ज्या`न जो अन`मोल छ।
December 3, 2021 admin समाचार 2280
October 17, 2021 admin समाचार 3433
April 8, 2021 admin समाचार 4136
दक्षिण कोरिया सर’कारले नेपालीका लागि केही खुकुलो गरेसँगै नेपाली विद्यार्थी जान पाउने भएका छन् । दक्षिण कोरियाले नेपाललाई कोरोना सङ्क्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूची’बाट हटाएर संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेसँगै नेपाली विद्यार्थी जान पाउने भएका हुुन्